Ahoana ny fomba hampianarana ny alikao hanaraka? | Tontolo alika
Ahoana ny fomba hampianarana ny alikanao hanaraka
Ny fofon'ny alika dia mivoatra kokoa noho ny antsika. Raha ny marina dia fantatsika rehetra izay monina na niara-niaina tamin'olona iray fa - maimbo daholo izay rehetra manodidina azy. Fomban'izy ireo mamantatra ny manodidina azy ireo izany.
Noho izany, rehefa irintsika ny hampivelarany bebe kokoa io fahaiza-manao io dia ho tsapantsika avy hatrany fa zavatra mora be ho azy izany, satria hampianatra azy zavatra mifanaraka amin'ny toetrany manokana isika. Noho izany Raha te hahafantatra ny fomba ampianaranao ny alikao ianao dia soraty ny toro-hevitra sy ny tetika ataonay.
1 Inona no tokony hampianarinao azy?
1.1 Faharetana sy fikirizana
1.3 Alika vonona hiasa
2 Ahoana ny fomba hampianarana azy hanaraka?
Inona no tokony hampianarinao azy?
Faharetana sy fikirizana
Mila faharetana ny fampianarana alika zavatra. Zava-dehibe tokoa ny hitondrantsika ao an-tsaina fa ny volom-borona tsirairay dia samy manana ny gadim-pianarany avy: ny sasany mila fotoana betsaka noho ny hafa. Raha mitaintaina sy tsy milamina isika, dia ho hitany sy ho tsapany koa izany, ka ny fotoam-piofanana dia ho loza na dia alohan'ny hanombohany aza.
Ary koa, tsy maintsy maharitra ianao. Ny miasa iray andro isan-kerinandro dia tsy hahomby. Tsy maintsy ataonao imbetsaka kokoa izany: fotoana fohy - 15 minitra eo ho eo - isan'andro dia mety.
Ireo fivoriana dia tokony ho, mahafinaritra indrindra. Ho an'izany tsy misy tsara noho ny fitsaboana alika homenay anao isaky ny manao zavatra tsara ianao, ary mazava ho azy fa arahaba tsara (tsy hoe amin'ny teny fotsiny, fa miaraka amin'ny safosafo sy kofehy ihany koa).
Ny tsy tokony hataonao mihitsy dia ny manameloka azy, na mampijaly azy (izany ankoatry ny tsy fanompoana zavatra hafa ankoatry ny fampitahorana antsika, dia heloka bevava).
Alika vonona hiasa
Na dia toa tsy izany aza, mandreraka ny fanarahana. Raha reraka ilay alika dia aleo averina indray ny heriny. Ary, ho fanampin'izay, ny fotoam-pivoriana tsirairay dia tokony hifarana tsara, miaraka amin'ny fahafinaretana, ary mila mamela azy foana ianao maniry bebe kokoa. Noho izany, mahaliana ny mijanona alohan'ny reraka.
Ahoana ny fomba hampianarana azy hanaraka?
Ankehitriny fantatsika izay mila ampianarintsika ny alikantsika hanaraka, tsy maintsy arahintsika tsikelikely io dingana io:
Voalohany, mila manome toky azy kely ianao sao sanatria, ohatra, mandeha an-tongotra.
Faharoa, hangataka olon-tiana hihazona ilay volom-borona isika eo am-panomanana ny faritra harahina amin'ny alàlan'ny fanaovana làlana miaraka amin'ny sakafo, fikosehana azy kely amin'ny bozaka ary hamela fitsaboana tsara amin'ny faran'ny dia.
Fahatelo, handeha hitady ny alika isika, ary miaraka amin'ny tadiny, hanatona ilay faritra isika. Raha vantany vao tonga izahay dia hiteny hoe "karohy" hanombohana mahita sakafo.
Fahefatra, hamerina ireo dingana ireo imbetsaka isan'andro isika. Rehefa hitantsika tsara io, fa efa fantany izay tadiavintsika ao aminy, dia azontsika atao ny mamela azy io tsy misy fehy.
Mba hianaran'ny alikanay mamantatra ary tsy hipoitra ny olana, dia tena zava-dehibe tokoa ny handinihantsika izao manaraka izao:
Tsy tokony hampiasa ny baiko »fikarohana» amin'ny toe-javatra hafa isika, raha tsy izany dia hampikorontana antsika isika ary ny volom-borona dia hanao izay rehetra azo atao mba hanapahana ny lalana lalovany. Ary ity dia mety ho olana lehibe tokoa, satria afaka mihinana sakafo tsy mety ianao.
Tsy maintsy manova ireo faritra mpanara-maso ianao; Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia tokony ho faritra mangina foana izy io, toa ny ala na ny zaridaina, fa tsy voatery ho faritra manokana mitovy amin'izany foana izy io.
Tokony hampianarintsika azy ilay didy hoe "mijanona". Tena ilaina amin'ny toe-javatra samihafa izy io: rehefa mandeha mitsangatsangana isika, rehefa mampianatra azy io hanaraka azy io mba hisorohana azy tsy hihinana zavatra tsy tokony, na hiandry antsika eny an-joron-trano, ohatra. eto manazava ny fomba fanaovana azy.
Manantena aho fa nahaliana anao izany. 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hampianarana ny alikanao hanaraka
Torohevitra hilazana hafanana mahery setra
Fa maninona no mitranga amin'ny alika ny fanafihana alika?